Manicure set - waa maxay shay kasta? | Bezzia
Manicure set - waa maxay shay kasta?
Susana godoy | 20/06/2022 10:06 | Quruxda
Waxaan jecelnahay inaan gacmahayagu mar walba nadiifsanno, sababtoo ah waxay sidoo kale wax badan ka sheegaan nafteena. Sidaa darteed, haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa tijaabiya noocyada kala duwan ee naqshadaha iyo midabada, waa waqtigii laga hadli lahaa go'an manicure. Ma garanaysaa mid kasta oo ka mid ah qalabkiisa waxa loogu talagalay?
Sababtoo ah ma noqon doonto markii ugu horeysay ee aan iibsano a go'an manicure waxaanan u malaynaynaa in aanay dhammaanteen heli doonin ciyaar isku mid ah. Haddaba intaanan nafteena ka horrayn, waxaa mar walba wanaagsan inaan ogaano mid kasta oo ka mid ah qaybaha uu ka kooban yahay waxa loo isticmaali doono waxaana hubaal ah markaas wixii ka dambeeya inaan awoodno inaan ku raaxaysanno labanlaab.
1 Manicure set: ciddiyaha ciddiyaha
2 Qalabka riixaha cuticle
3 Maqasyo jeexan iyo maqasyo
4 cidiyaha naasaha
5 mindi dhogorta
6 Qalab isku dhafan
Manicure set: ciddiyaha ciddiyaha
Mid ka mid ah qalabka aan sida caadiga ah ka helno qalab kasta oo manicure ah waa kan. Waxay leedahay qaab saddex xagal xagga sare ah waana run in aynaan mar walba garanayn waxa loogu talagalay, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa in ay tahay in la nadiifiyo cidiyaha. Sababtoo ah ka dib marka la gooyo ama xereeyo iyaga, qaar ka mid ah wasakhda ayaa laga yaabaa inay ku ururto hoostooda, qalabkuna wuxuu leeyahay habka ugu fiican ee looga saaro. Miyaad si joogta ah u isticmaashaa?
Qalabka riixaha cuticle
Sababtoo ah waa in aan had iyo jeer la gooyn jeexjeexyada ciddiyaha. Waxaa jira marar badan oo aan u tagnay si aan u helno manicure oo aan aragno sida xarumaha quruxda leeyihiin qalab lagu riixo goynta iyada oo aan la saarin. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay qalabka leh spatula ama qaaddo qaab ah, oo lagu soo koobay xagga sare. Markaa jeex-jeexa ayaa laga saarayaa, gaar ahaan marka aaggani aad u adag yahay. Hadda waxay noqon doontaa waqtigii lagu bilaabi lahaa manicure lafteeda!
Maqasyo jeexan iyo maqasyo
Sidoo kale cuticles waxaan yeelan doonaa laba qalab oo waaweyn. Dhinaca kale, maqasyada, kuwaas oo noqon doona kuwa leh talooyinka ugu fiiqan iyo kuwa ugu fiican, iyo sidoo kale dhamaystirka qalooca. Dabcan, kaliya markaan aragno, waxaan horeyba u ogaan doonaa farqiga maqaska caadiga ah. Sababtoo ah kuwani way khafiifsan yihiin sidaas darteed waxaa loola jeedaa in la gooyo gooyada oo kaliya. Halka Maqasyadu waxay sidoo kale qabtaan shaqo la mid ah maqasyada, laakiin leh gees aad u fiiqan si ay u awoodaan in ay gooyaan maqaarka sheegay.
Dabcan, haddii aan ka hadalno nippers cuticle, ma rabno cidiyaha naasaha in laga tago midkoodna. Waxay ku fiican yihiin inay awoodaan inay gooyaan oo ay sidoo kale qaabeeyaan ciddiyaha. Laakin waxaa loogu talagalay cidiyaha dhumuc weyn, labadaba gacmaha iyo cagaha. Haddaba, si aysan waxyeello u gaarsiin goobta lagu daweynayo, xasuusnoow in loo isticmaalo kiiskan oo keliya marka ay jirto meel ciddiyaha cufan leh oo aan maqas lagu gooyn karin.
Waxa jira qalab kale oo laga yaabo inaynaan aad u isticmaalin sidoo kale, inkastoo xaaladaha qaarkood ay noqon doonto aasaas. Marka aan yeelano xoogaa harag ah oo xoogaa ka go'ay aagga ciddiyaha, waxaan isticmaali doonaa mindidan. Inkasta oo aanay u samaysan sida mindi sida aynu u naqaanno. Waxay ku saabsan tahay madax leh daab fiican, oo u eg shanlo fidsan. Kaliya markaan gudubno, waxaan ka saari doonaa maqaarkaas horay u go'ay, iyada oo aan dhib badan lahayn. Mararka qaarkood, gudaha manicure-ka waxaan ka helnaa mid kale oo la mid ah laakiin kaas ayaa leh qaab 'V'. Labaduba waxay leeyihiin shaqo isku mid ah.
Mararka qaarkood waxaan sidoo kale aragnaa sida isla qalabku wuxuu leeyahay madax labanlaab ah, halkii ay ka ahayd hal kaliya. Laakin ma jirto wax lala yaabo waayo waxay yeelan doontaa ujeedo la mid ah kuwa aan ka faalloonnay qaarkood. Taasi waa, waxaa jiri kara mid nadiifiya ciddiyaha oo riixaya gooyo isku mar. Markaa qalabkan oo kaliya, waxaan ku qaban karnaa laba shaqo hal mar.
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in faylasha ciddiyaha ay sidoo kale ka soo muuqan doonaan manicure-ka, kaas oo aan dhammaanteen si fiican u naqaanno, iyo sidoo kale tuubooyinka iyo xitaa ciddiyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Manicure set - waa maxay shay kasta?
Qaababka gaaban ee guga